CPAU andian-dahatsoratra tariby bimetallika efa voarindra
DTL-4 lugs bimetallic efa voarindra no ampiasaina hananganana ny fifandraisana misy eo amin'ny tariby LV-ABC sy ny fitaovana elektrika. Ny palma dia vita amin'ny varahina madio 99,9% ary ny tanany dia vita amin'ny alimina madio 99,6%. Ny faritra ampitan'ny mpampita dia mety ho elastika Ny kaody miloko amin'ny peratra dia mamantatra mora kokoa ny peratra elastika sy ny diloilo efa nofenoina hahatonga azy ho tsy tantera-drano. Ny fitsapana henjana ny rano dia atao amin'ny 6KV ao anaty rano mandritra ny iray minitra. Ny fantsom-panafody dia vita amin'ny polymer mahatohitra toetr'andro sy mahatohitra UV.
DTL / DTL-2 Bimetal Cable Lug, lavaka tokana na roa)
Lug cable ho an'ny fametrahana eo amin'ny faran'ny tariby hanaovana fifandraisana elektrika eo amin'ny mpampita tariby sy ny fitaovana elektrika hafa. Ny lug dia misy palma amin'ny fampifandraisana ny lug amin'ny fitaovana elektrika, ny barika silindrona lava manaparitaka amin'ny alalàn'ny faran'ny mpampita tariby, ary ny fampidirana ho an'ny fako ao anaty barika ary ny fanitarana manodidina sy ny tampon'ny barika mankany ampifanaraho amin'ny tariby kely kokoa ny lug, tsara kokoa raha ny tongony no amboarina tsara amin'ny hatevin'ny rindrina mitovy.
Londra tariby bimetal
Ny mpampifandray amin'ny terminal dia ampiasaina hampifandraisana conducteur tap ho an'ny fitaovan'ny herinaratra (mpanova, mpandika fizaran-tany, mpandika faritra, fanapahana. Sns) na amin'ny bushing substation rehetra. Ny mpampifandray aluminium dia ampiasaina ihany koa hampifandray ny mpampita ny paipaika mpampifandray T. Ny mpampitohy dia mivezivezy karazana conpressive ary mihidy, ny karazany roa dia manana zoro 0 ° 30 ° sy 90 ° miaraka amin'ny fitarihan'ny conducteur paompy.
DT tariby lug / SC Terminals mampitohy Tube
DT dia azo ampiharina amin'ny fifandraisana misy tariby amin'ny fizarana herinaratra famatsiana herinaratra miaraka amin'ny fitaovana elektronika. Izy io dia vita amin'ny fantsom-bozaka T2 amin'ny alàlan'ny fantsom-pahafatesana sy firakotra mifono.
SC (JGY) Copper Terminals mampitohy Tube
JGY Copper Crimp Lug? dia vita amin'ny fantsom-barahina varahina madio 99,2 isan-jato ambony ary nopetahany firaka. Miasa mari-pana -55 ℃ -150 ℃.
Ny JGY Copper Crimp Lugs dia mety amin'ny fampifandraisan'ny mpanaraka varahina (fizarana 1.5-1000mm2) amin'ny tariby herinaratra miaraka amin'ny fitaovana elektronika.
DT Varahina tariby varahina
DTL andian-dahatsoratra Al-Cu fifandraisana dia mety amin'ny fifandimbiasan'ny fizarana fitaovam-pandrefesana tariby fototra sy fitaovana elektrika. DL Aluminium dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny terminal terminal mampifandray ny tariby sy ny fitaovana elektrika. Ny terminal DT varahina dia ampiasaina amin'ny fifandraisan'ny terminal varahina amin'ny tariby sy ny fitaovana elektrika. Ny vokatra dia mandray ny asany amin'ny welding, ny orinasanay dia manome ny terminal terminal Cu-Al sy ny clamp tariby vita amin'ny teknika fampakaram-bady. Ny vokatra dia manana endrika toy ny tanjaky ny welding mafy, fananana elektrika tena tsara, fanoherana ny harafesin'ny galvanika, androm-piainana lava, tsy misy tapaka mihitsy, fiarovana avo lenta, sns.